YEYINTNGE(CANADA): Friday, August 05
စက်ာပူရောက် မြန်မာတပြည်လုံး G.T.I ကျောင်းဆင်းများ တွေ့ဆုံပွဲ
စက်ာပူရောက် မြန်မာတပြည်လုံး G.T.I ကျောင်းပေါင်းစုံမှ A.G.T.I ကျောင်းဆင်းများ တွေ့ဆုံပွဲကို သြဂုတ်လ (၇) ရက်နေ့ (တနဂ်နွေနေ့)၊ နေ့လည် (၁) နာရီအချိန်၊ No. 17, Jalan Sendudok, Sembawang Spring Estate, Singapore 769454 (Behind Sembawang Shopping Centre) မှာ ကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။တက်ရောက်​မည်သူများ ကိုဌေး (84159477), ကိုသိန်း (98004706), နဲ့ ဦးထိုက်တင်စိန် (97898640) တို့ကို ဆက်သွယ်စာရင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/05/20110အကြံပြုခြင်း
5 August 2011 Yeyintnge's Diary.doc
694K View Download
5 August 2011 Yeyintnge's Diary.odt
5 August 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
5 August 2011 Yeyintnge's Diary
ချီလီတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင် တော်လှန်ကြပြီ
Friday, 05 August 2011 04:08
“အစိုးရဟာ သေချင်းဆိုး မဟာ အမှားကြီးကို ကျူးလွန်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်။” ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ၀ါလယ်ဂျို့စ်က ဆိုသည်။ “ဒီဆန္ဒပြပွဲကို ဖုံးကွယ်၊ ဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့ မိုက်မိုက်မဲမဲ ကြိုးစားနေတုန်းပဲ။ ဒီလိုလုပ်လို့ကတော့ လူထုဟာ လမ်းမပေါ်ကို ပိုလို့သာ ဆက်ထွက်လာမယ်။ မကျေနပ်ချက်တွေက အတုံးလိုက် အတစ်လိုက်ပဲ။”
ဆန်တီယာဂိုမြို့ ရဲသားများက မျက်ရည်ယိုဗုံးများ၊ မီးသတ်ပိုက်လုံးကြီးများဖြင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများအတွက် တောင်းဆို ဆန္ဒပြကြသူ ကျောင်းသားများကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပြီး ၂၃၅ ဦးကို ဖမ်းဆီးထားကြသည်။
ပညာရေးစနစ်ပြောင်းလဲရန် ဆန္ဒပြပွဲများတွင် ကျောင်းသားများနှင့် ကျောင်းဆရာများ တက်ကြွစွာ ပါဝင်လျက်ရှိသည်
လုံထိန်းတပ်ဖွဲ့များက အထက်တန်းအဆင့်နှင့် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ၏ မြို့လယ် လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ဆန္ဒပြမှုကို တိုက်ခိုက် ဖြိုခွင်းခဲ့ကြသည်။ မီးသတ်ပိုက် ရေလုံးကြီးများနှင့် မျက်ရည်ယိုဗုံးများကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် မြင်းစီး လုံထိန်း တပ်သားများကလည်း ကျောင်းသားများ မီးရှို့တားဆီးထားသော အတားအဆီးများကို ဖြတ်ကျော်လျက်ရှိသည်။
ရဲဖက်က ကျောင်းသား ၂၃၅ ဦးကို ဖမ်းဆီးထားပြီး ရဲသား ၂ ဦး ဒဏ်ရာရသွားခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြမှုများမှာ တရားမ၀င်ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ရိုဒရီဂိုနှင့် အာဏာပိုင်တို့က ကြေညာခဲ့သည်။
ချီလီနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးမပြည့်မစုံ၊ မမျှတမှုဖြင့် တည်ရှိနေသည့် ပညာရေးစနစ်အား ပြုပြင် ပြောင်းလဲပေးရန် ကျောင်းသားများက တောင်းဆို ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး မော်တော်ကား တာယာများကို မီးရှို့ပြီး လမ်းမများအား ပိတ်ဆို့ ထားခဲ့ကြသည်။ ယာဉ်ကြော လမ်းကြောင်းများ ပိတ်ထားခဲ့ရသည်။
ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသည့် ကျောင်းသားများ ရှိသလို မျက်နှာဖုံးစွပ် ဆန္ဒပြသူများက ရဲများနှင့် လုံထိန်းများကို ကျောက်ခဲများဖြင့် ပြန်လှန် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။
“အရာအားလုံးမှာ အကန့်အသတ်ဆိုတာ ရှိရမယ်” သမ္မတ ဆဘတ်စ်ရှန် ပင်နာရာက သတိပေးစကား ဆို၏။
“လမ်းပေါ်ဆန္ဒပြတဲ့ ကာလက ခေတ်ဟောင်းသွားပြီ” ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက ပြောသည်။
“သိမ်းပိုက်ခံ မြို့ကြီးလိုပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀ တုန်းကလိုမျိုးပေါ့။” တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်သူ ကာမီလာဝါလဲဂျို့စ်က တုံ့ပြန် ပြောဆိုလိုက်သည်။ သူမက ၁၉၇၃-၉၀ ကာလ စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်ကို ရည်ညွန်း ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“လူထုမှာ လူစုလူဝေးနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိတော့ဘူးတဲ့လား”
ဖိနှိပ် အုပ်ချုပ်မှုကို တွန်းလှန် တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့
ဖြိုခွင်း၊ ဖမ်းဆီးမှုများရှိနေသော်လည်း ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်က ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်ကြပါရန် ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားများကို လှုံ့ဆော် တိုက်တွန်း ပြောကြားလိုက်ပြီး ကြာသပတေး ညဖက်တွင် တမြို့လုံး “သံပုံး၊ ဒယ်အိုးတီး” ကြရန်လည်း ကြေညာထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က စတင်သော လမ်းမကြီးများပေါ် ဆန္ဒပြပွဲများတွင် ကျောင်းသားများ၊ ဆရာဆရာမများနှင့် အခြားသော ပညာရေး ၀န်ထမ်းများလည်း ပါဝင်ကြပြီး လူ တစ်သိန်းခန့် စုဝေး ခဲ့ကြသည်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ လက်အောက်၊ အာဏာရှင် စနစ်ခေတ်ကတည်းက တည်ရှိနေခဲ့သည့် ပညာရေး စနစ်ဟောင်းနှင့် အစိုးရက ငွေကြေး ထောက်ပံ့ ကူညီနေမှု ပုံစံတို့ကိုလည်း အခြေခံကျကျ ပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်ပေးရန် တောင်းဆိုထားကြသည်။
အာဏာရှင်ကြီး သြဂတ်စ်တို ပင်နိုရှေးလက်ထက်က လူထုပညာရေးမှာ မြို့နယ်အဆင့် အုပ်ချုပ်ရေး လက်အောက်က မပြည့်မစုံသော ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ရှင်သန်ခဲ့ရသည်။
သမ္မတ ပင်နာရာက အချက် ၂၁ ချက်ပါ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးမူများကို ကမ်းလှမ်းထားခဲ့သည်။ လက်ဝဲယိမ်း ဥပဒေပြုသူများနှင့် တွေ့ဆုံရန် ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၃၀၀ က ဆန္ဒပြသူများကို သမ္မတ နန်းတော်သို့ မ၀င်ရောက်နိုင်ရန် တားဆီးခဲ့ကြရသည်။ လူငယ် ရာပေါင်းများစွာက အပိတ်အဆို့၊ အတားအဆီးများကို ကျော်လွှားပြီး လူစုလူဝေးဖြင့် ဆန္ဒပြကြသည့် ရင်ပြင်တော်နေရာသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ မြို့တော် အနှံ့အပြားတွင်လည်း လူစု လူဝေးများဖြင့် စုရုံး ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖြိုခွင်းလိုက်သည်နှင့် အခြားနေရာတွင် ပြန်လည် စုစည်းကြပြီး ဆက်လက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း မျက်ရည်ယိုဗုံးများဖြင့် ဆက်လက် ဖြိုခွင်းကြပြန်သည်။
မျက်ရည်ယိုဗုံးဒဏ်ကြောင့် မြို့တော်အနှံ့အပြားတွင် အသက်ရှုကြပ်ခြင်းကို ခံစားနေကြရသည်။ မီးရထားများကို ပိတ်ထားလိုက်ပြီး လူထု ဆက်သွယ်ရေး ရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်သည်။
ဆန္ဒပြသူ အများစုက ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် ဆန္ဒပြသော်လည်း အချို့ကမူ မျက်နှာဖုံးစွပ်များ ၀တ်ဆင်ပြီး ကားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ကျောက်ခဲများဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။
မောက္ခ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု သတင်း
ဆင်း​ရဲမွဲ​တေမှု ​လျှော့​ချ​ရေး​ လက်​တွေ့​ ပြဿနာများ​ ရင်ဆိုင်​နေရ
Published on August 5, 2011 by နေသွင်
မြန်မာပြည် ​ဒေသတချို့​မှာ အစိုး​ရက အ​ကောင်အထည်​ဖော်​နေတဲ့​ ဆင်း​ရဲမွဲ​တေမှု တိုက်ဖျက်​ရေး​ အစီအစဉ်တခုဖြစ်တဲ့​ အ​သေး​စား​ ​ချေး​ငွေ လုပ်ငန်း​မှာ အဂတိ လိုက်စား​မှု​တွေ၊​ စနစ်မကျ မှု​တွေ​ကြောင့်​ ​ရေရှည်မှာ ​အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ဘူး​လို့​ ​ဝေဖန် ​နေကြပါတယ်။
စီး​ပွား​ရေး​ပညာရှင် ဦး​ဟန်ထွန်း​ (အခွန်) က အ​သေး​စား​ ​ချေး​ငွေလုပ်ငန်း​ဟာ ဆင်း​ရဲမွဲ​တေမှု ​လျှော့​ချ​ရေး​အတွက် အာမမခံနိုင် ​တော့​ဘူး​လို့​ ဆိုပါတယ်။
“မကြာ​သေး​ဘူး​ဗျာ။ ကျ​နော်တို့​ အာဖရိကမှာ အဲဒီလို ပြဿနာ ကြုံရတယ်။ ကျ​နော်တို့​ microfinancing (အ​သေး​စား​ချေး​ငွေလုပ်ငန်း​) ​ပေါ့​ဗျာ။ ​စော​စောပိုင်း​တုန်း​က​တော့​ ယူနွတ် (Muhammad Yunus) တို့​ ဘာတို့​ ဘင်္ဂလား​ ​ဒေ့​ရ်ှက microfinancing လုပ်တဲ့​ Grameen Bank ဘဏ်တို့​ ဆိုတာက ​အောင်မြင်တယ် ဘာညာဆိုပြီး​ သူတို့​ နိ်ုဘယ်လ် ဆု​တွေ​တောင် ​ပေး​တယ်​ပေါ့​ဗျာ။ အခု​တော့​လည်း​ပဲ ​နောက်ပိ်ုင်း​ ပညာရှင်​တွေ သု​တေသန ပြန်လုပ်တဲ့​အခါကျ​တော့​ microfinancing က တကယ်​တော့​ ဆင်း​ရဲမွဲ​တေမှု ​လျှော့​ချ​ရေး​အတွက်ကို အ​ထောက်အကူ မဖြစ်ဘူး​လို့​ ဆိုတဲ့​ အ​ဖြေတခု ထွက်လာတယ်။ ဆင်း​ရဲမွဲ​တွေမှု ​ပျောက်မသွား​နိုင်ဘူး​ပေါ့​ဗျာ။ သူတို့​ ဘာကို အဓိကထား​ပြောလဲဆို​တော့​ လူတိုင်း​ လူတိုင်း​ဟာတဲ့​ စီး​ပွား​ရေး​လုပ်ငန်း​ရှင် အ​နေနဲ့​ ​မွေး​ဖွား​လာတဲ့​လူ​တွေ မဟုတ်ဘူး​တဲ့​။ စီး​ပွား​ရေး​လုပ်ငန်း​ လုပ်ငန်း​လုပ်နိုင်စွမ်း​ရှိတဲ့​ လူ​တွေ မဟုတ်ဘူး​ပေါ့​ဗျာ။”
လော​လောဆယ် ထုတ်​ချေး​ပေး​နေတဲ့​ အ​သေး​စား​ချေး​ငွေ​တွေမှာလည်း​ ပြဿနာ​တွေရှိ​နေပါတယ်။ ဆင်း​ရဲသား​တွေအတွက် ထုတ်​ချေး​ ​ပေး​နေတဲ့​ ​ချေး​ငွေ​တွေဟာ အမှန်တကယ် လိုအပ်​နေတဲ့​ လူ​တွေလက်ထဲ မ​ရောက်ဘဲ ဖြစ်​နေတယ်လို့​ ​ဝေဖန်ခံ​နေရပါတယ်၊​
ပဲခူး​တိုင်း​၊​ ​ရွှေကျင်​ဒေသခံတဦး​က “နိုင်ငံ​တော်သမ္မတကြီး​ရဲ့​ မဟာကရုဏာ​တော်နဲ့​ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့​ ဆင်း​ရဲသား​ ပ​ပျောက်​ရေး​ စီမံကိန်း​ဟာ စပြီး​လို့​ တလမပြည့်​သေး​ဘူး​ မ​အောင်မြင်ဘူး​ဆိုတာ သွား​တွေ့​နေရတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်​ရေး​တွေ​ခေါ်ပြီး​တော့​ ​ရော့​ မင်း​တို့​တိုက်နယ်အတွက် ​ချေး​ငွေ ဒီ​လောက်ရတယ် ​ချေး​ပေး​လိုက်ဆို​တော့​ အင်မတန်ကို က​ရော်ကမည် နိုင်တယ်” လို့​ ​ပြောပါတယ်။
မြို့​နယ်အဆင့်​က​နေ ​ကျေး​ရွာ​တွေကို ခွဲ​ဝေ​ပေး​တဲ့​ ​ချေး​ငွေ​တွေကို ​ကျေး​ရွာအုပ်ချုပ်​ရေး​မှူး​တွေက အလွဲသုံး​စား​ လုပ်တာ​တွေ၊​ အဆင်​ပြေတဲ့​ လူ​တွေကိုပဲ ​ချေး​ပေး​တာ၊​ တဆင့်​အတိုး​ချ စား​တာတဲ့​ အထိရှိ​နေတယ်လို့​ ဆိုကြပါတယ်။
ပြီး​ခဲ့​တဲ့​ ​မေလအတွင်း​က ​နေပြည်​တော် ဆင်း​ရဲမွဲ​တေမှု တိုက်ဖျက်​ရေး​ အလုပ်ရုံ​ဆွေး​နွေး​ပွဲမှာ သမ္မတ ဦး​သိန်း​စိန်က ဆင်း​ရဲနွမ်း​ပါး​မှု​လျှော့​ချဖို့​ မြန်မာနိုင်ငံလူဦး​ရေရဲ့​ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း​ ​နေထိုင်တဲ့​ ​ကျေး​လက်ပြည်သူ​တွေဘဝ တိုး​တက်လာဖို့​ လိုတယ်လို့​ ​ပြောကြား​ခဲ့​ပါတယ်။
လူဦး​ရေရဲ့​ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း​မှာ ​ကျေး​လက်လယ်သမား​တွေသာမက၊​ ​မြေယာမဲ့​ လက်လုပ်လက်စား​တွေလည်း​ ပါဝင်​နေပါတယ်။
ပဲခူး​တိုင်း​ မင်း​လှနယ်ခံတဦး​က အစိုး​ရ​ချေး​ငွေ​တွေကို လယ်သမား​တွေ သာမက လက်လုပ်လက်စား​သမား​တွေ အတွက်လည်း​ ​ချေး​ငွေ လိုအပ်​နေတယ်လို့​ ဆိုပါတယ်။
ဒါ​ပေမယ့်​ ​ချေး​ငွေထက် ပိုပြီး​အ​ရေး​ကြီး​တာက အလုပ်အကိုင်ရဖို့​ လို့​ ဆိုပါတယ်။
“ဒီက ၃ ​သောင်း​ထုတ်​ပေး​ရင် ​လော​လောဆယ် ​ချေး​ငှား​စား​ထား​တဲ့​ အ​ကြွေး​လေး​တွေကို နည်း​ရောများ​ရော ဖဲ့​ပေး​ရမယ်။ ​လော​လောဆယ်ဆယ် ဆပ်ပြီး​တော့​ ထား​မယ်။ ဆို​တော့​ ဒီ ၃ ​သောင်း​ကို ပြန်​ပေါ်လာ​အောင်ဆိုတာက မဖြစ်နိ်ုင်ဘူး​။ အရင်း​နှီး​တခုခုကို ​ပေး​တယ်ဆိုတာက တမျိုး​ပေါ့​နော်။ ​ငွေအ​နေနဲ့​က​တော့​ ဒီ​ငွေဟာ အချိန်တန်လို့​ရှိရင် ၂ ကျပ်တိုး​ပဲဖြစ်ဖြစ် ၁ ကျပ်တိုး​ပဲဖြစ်ဖြစ် လနဲ့​ချီပြီး​ တက်လာတဲ့​ အတိုး​ပေါ်မှာ အ​တောင်း​ခံရမှာပဲ။ မ​ပေး​နိုင်လို့​ရှိရင် ဥပ​ဒေအရ ကန့်​သတ်မှု​တွေ ရှိလာလိမ့်​မယ်။”
တကယ်​တော့​ ​လော​လောဆယ် အစိုး​ရ ​ချေး​ငွေရတယ်ဆိုတဲ့​ လယ်သမား​တွေ ကိုယ်နှိုက်က အရင်း​နှီး​ မလုံ​လောက်​သေး​တဲ့​ အ​ခြေအ​နေပါ။
မင်း​လှနယ်မှာ ဒီနှစ် ​ရေကြီး​ပြီး​နောက် ​ရေမြှုပ်ပျက်စီး​ကျန်ခဲ့​တဲ့​ လယ်​တွေကို​တောင် ပြန်မစိုက်နိုင်ကြဘူး​လို့​ နယ်ခံ လယ်သမား​တဦး​က ဆိုပါတယ်။
“၂ ဧက ပိ်ုင်တဲ့​လူရှိတယ်၊​ ၃ ဧက ပိ်ုင်တဲ့​လူရှိတယ်၊​ ၅ ဧက ပိ်ုင်တဲ့​လူရှိတယ်၊​ ဧက ၃၀ ပိုင်တဲ့​လူ ရှိတယ်​ပေါ့​။ ဒီလယ်ကွင်း​တခုအတွင်း​မှာ လယ်ပိုင်ဆိုင်မှု အတိုင်း​အတာ မညီမျှဘူး​။ အဲဒီအခါကျ​တော့​ လယ်ဧက များ​များ​ရှိတဲ့​လူက​တော့​ သူက အခံရှိတဲ့​ အတွက်​ကြောင့်​မို့​လို့​ သူက​တော့​ တချို့​ပြုပြင်မှု​တွေ လုပ်ကြတယ်။ တချို့​ ၂ ဧက၊​ ၃ ဧက လယ်သမား​က​တော့​ ပြန်ကို မစိုက်​တော့​ဘူး​။ သူတို့​မှာ အဲဒီဥစ္စာကို ပြန်လိုက် ဖာ​ထေး​နိုင်တဲ့​ ​ငွေအင်အား​ မရှိ​တော့​ဘူး​။”
နေပြည်​တော် အလုပ်ရုံ​ဆွေး​နွေး​ပွဲမှာပဲ သမ္မတဦး​သိန်း​စိန်က တနိုင်ငံလုံး​ရဲ့​ စီး​ပွား​ရေး​တခုလုံး​ ​ပြောင်း​လဲတိုး​တက်ဖို့​အတွက် ​ငွေ​ကြေး​မူ ဝါဒ၊​ ဘဏ္ဍာ​ရေး​မူဝါဒ၊​ ကုန်သွယ်​ရေး​မူဝါဒ၊​ ရင်း​နှီး​မြှုပ်နှံမှု မူဝါဒ​တွေ၊​ လုပ်ထုံး​လုပ်နည်း​တွေကို ပြုပြင်သွား​မယ်လို့​ ​ပြောကြား​သွား​ခဲ့​ပါတယ်။
စီး​ပွား​ရေး​ပညာရှင် ဦး​ဟန်ထွန်း​ (အခွန်) က မြန်မာပြည်မှာ ​မြေယာစနစ် ပြုပြင်​ပြောင်း​လဲဖို့​ လိုအပ်​နေတယ်လို့​ ​ပြောပါတယ်။
“အထူး​သဖြင့်​လိုအပ်​နေတာ ​မြေယာစနစ်ပဲ။ ယ​နေ့​ ​မြေယာစနစ်ကို လယ်လုပ်သူ လယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်​ရှိတယ်ဆိုတဲ့​ မူက​နေ၊​ လယ်လုပ်သူ လယ်ပိုင်ခွင့်​ဆိုတဲ့​ မူကို ​ပြောင်း​ရွှေ့​ဖို့​ လိုအပ်တယ်လို့​ ကျ​နော်ထင်တယ်။”
ကျေး​လက်ဆင်း​ရဲမွဲ​တေမှုပ​ပျောက်​ရေး​ဟာ ​ကျေး​လက် စိုက်ပျိုး​ရေး​ တိုး​တက်ထွန်း​ကား​ ​အောင်လုပ်ဖို့​ပဲဖြစ်တယ်လို့​ ဆိုပါ တယ်။ ဒါ​ကြောင့်​ ​မြေယာစနစ်​ပြောင်း​လဲလိုက်လို့​ စိုက်ပျိုး​ရေး​စနစ်ထွန်း​ကား​လာရင်၊​ လယ်သမား​တွေ​ရော၊​ စိုက်ပျိုး​ရေး​စနစ်ကို မှီခိ်ု​နေတဲ့​ လက်လုပ်လက်စား​တွေပါ ဆင်း​ရဲတွင်း​က ရုန်း​ထွက်နိုင်မယ်လို့​ ဦး​ဟန်ထွန်း​က ဆိုပါတယ်။
ကျွမ်း​ကျင်သူတချို့​က​တော့​ ​ကျေး​လက်ဆင်း​ရဲမွဲ​တေမှု ​လျှော့​ချဖို့​ဆိုရင် ​ကျေး​လက်လယ်သမား​တွေအတွက် တိုက်ရိုက်အကျိုး​ဖြစ်ထွန်း​စေမယ့်​၊​ စိုက်ပျိုး​ရေး​ပို့​ ကုန်​တွေ ကမ္ဘာ​ဈေး​ကွက်နဲ့​ တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်ခွင့်​ မရ​အောင်၊​ ကန့်​သတ်ထား​တဲ့​ စည်း​မျဉ်း​စည်း​ကမ်း​တွေကို အရင်ပြုပြင် ​ပြောင်း​လဲဖို့​ သင့်​တယ်လို့​ ​ထောက်ပြကြပါတယ်။
စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး အုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းပြုကျင့်ခံရ
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ်တွင် ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင် ဗုဒ္ဓဘာသာ မာရ်မာ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး အုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းပြုကျင့်ခံရကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
အဆိုပါ အမျိုးသမီးငယ်မှာ လွန်ခဲ့သော ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေပိုင်းက အနီးအနားရှိ ကျေးရွာ တစ်ခုကို သွားရောက်စဉ် အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းကို ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
အခင်း ဖြစ်ပွားရာ ဒေသ မာတိန်ရန်ဂ ရဲစခန်းမှာ တာဝန်ရှိသူ ရဲစခန်းမှူး မီဇာနုရ် ရာဟာမန် ( Mizanur Rahman) က အဆိုပါ အမျိုးသမီးငယ်မှာ သူမ၏ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ Shankar Chandra Shil နှင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေပိုင်းက ရိန်းချမ်း ဂျာနာ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ သွားရောက်စဉ် အဆိုပါ အမျိုးသားမှ လမ်းမှ စောင့်နေသူ တခြား အဖေါ်နှစ်ဦးနှင့် အတူ အဆိုပါ အမျိုးသမီးငယ်အား တောထဲ ဆွဲခေါ်ပြီး မုဒိမ်းပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားသည်။
သူမအား မုဒိမ်းပြုကျင့်စဉ် အော်ဟစ် အကူ အညီတောင်းခံ သဖြင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများ လိုက်လာပြီး အဆိုပါနေရာတွင် Shankar ကို လက်ပူး လက်ကြပ် ဖမ်းမိပြီး နောက် (၂) ဦးမှာ လွှတ်မြောက်သွားခဲ့သည်။
ယခုအခါ အမျိုးသမီးငယ်အား ခါဆိုရီမြို့ ဆေးရုံတွင် ဆေးစစ်နေပြီး မုဒိမ်းကျင့်ရာ ပါဝင်သူဟု စွပ်စွဲခံရသူ Shankar ကိုမူ ဖမ်းဆီးထားသည်။
မုဒိမ်းကျင့်ခံရသူ အမျိုးသမီးငယ်မှာ အသက် ၁၄၊ ၁၅ နှစ်အရွယ်ရှိပြီး ခါကာဆိုရီ ( ဖလံထောင်) ခရိုင် မာနီချရီမြို့နယ် ဟာတီမူရ နေရာမှ ဦးသိန်းကြာလှ သမီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော ဇူလိုင်လ (၃၀) ရက်နေ့ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်စပ်ချင်း ကပ်နေသည့် စစ်တကောင်း တောင်တန်းနယ် တောင်ပိုင်း လမားမြို့နယ်တွင် ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင် မာရမာ အမျိုး သမီးငယ် တစ်ဦးကို ဒေသခံ ဘင်္ဂလီ တစ်ဦးက မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြိုးစားစဉ် သူမ၏ အဖိုးတော်သူ ၆၅ နှစ်အရွယ် လူကြီး တစ်ဦး၊ အသက် ၃၅ နှစ်ရှိ သူမမိခင်နှင့် အသက် ၅ နှစ်အရွယ် သူမ မောင်ငယ်တို့ကို သတ်ဖြတ် ပစ်ခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ ပြဿနာများ ရက်ဆက်ဆိုသလို ဖြစ်ပွားနေသဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံရှိ တောင်တန်းနယ် တိုင်းရင်းသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူနည်းစုတို့၏ ဘ၀လုံခြုံရေးမှာ အလွန်တရာ စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်နေကြောင်း ဒေသခံ ဆရာတော် တပါးက ပြောသည်။
၁၉၅၇ မှ ၁၉၆၀၊ ရန်ကုန်မြို့ အင်္ဂလိပ်မက်သဒစ်ကွန်ဗင့်ကျောင်း(အထက - ၁ ဒဂုံ) တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။
၁၉၆၄ မှ ၁၉၆၇၊ အောက်စဖို့တက္ကသိုလ် ဟူ့စ်ကောလိပ်၌ ဒဿနဗေဒ၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနှင့် စီးပွားရေးပညာရပ်များကို လေ့လာဆည်းပူးခဲ့ပြီး၊ ၀ိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။
- လန်ဒန်တက္ကသိုလ်အရှေ့တိုင်းနှင့် အာဖရိကလေ့လာရေးဌာနတွင် ပါရဂူဘွဲ့အတွက် “၁၉၂၀-၁၉၄၅ အတွင်း ထုတ်ဝေခဲ့သော စာနယ်ဇင်းများသည် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကို အထောက်အကူပြုခဲ့ပုံ” အမည်ရှိ ဘွဲ့လွန်စာတမ်းကိုတင်သွင်းသည်။
(၁) ဦးအောင်ကြီး - ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) သူရဦးတင်ဦး - ဒုဥက္ကဋ္ဌ
(၃) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး
(၄) ဦးကြည်ဟန် - အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်
(၅) ဦးချစ်ခိုင် - အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်
(၆) ဦးဝင်းတင် - အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်
(၇) ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင် - လူထုလူတန်းစား ဌာနမှူး
(၈) ဦးလွင် - ဘဏ္ဍာရေး ဌာနမှူး
(၉) ဦးအောင်လွင် - ပြန်ကြားရေး ဌာနမှူး
(၁၀) ဦးအောင်ရွှေ - စည်းရုံးရေး ဌာနမှူး
(၁၁) ဦးကြည်မောင် - သုတေသန ဌာနမှူး
(၁၂) ဦးဘရွှေ - အုပ်ချုပ်ရေး ဌာနမှူးတို့ ဖြစ်သည်။
၁၉၈၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်း၍ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ပေးပို့သည်။ ယင်းတို့မှာ -
(၁) ဦးတင်ဦး - ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး
(၃) ဦးဝင်းတင် - အတွင်းရေးမှူး
(၄) ဦးချစ်ခိုင် - အတွင်းရေးမှူး
(၅) ဦးကြည်မောင် - သုတေသနမှူး
(၆) ဦးအောင်ရွှေ - စည်းရုံးရေးမှူး
(၇) ဦးလွင် - ဘဏ္ဍာရေးမှူး
(၈) ဦးအောင်လွင် - ပြန်ကြားရေးမှူး
(၉) ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင် - လူထုလူတန်းစား ဌာနမှူး တို့ ဖြစ်သည်။
- နယူးယောက်အခြေစိုက် ‘မစ်’ (Ms) မဂ္ဂဇင်းမှ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသမီး ထူးချွန်ဆုရွေးချယ်ရာ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ဇန်န၀ါရီ ၁၄၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို ပြန်လည် တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များမှာ -
(၁) ဦးအောင်ရွှေ - ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) သူရဦးတင်ဦး - ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ
(၄) ဦးလွင် - အတွင်းရေးမှူး
(၅) ဦးဝင်းတင် - အဖွဲ့ဝင်
(၆) ဦးခင်မောင်ဆွေ - အဖွဲ့ဝင်
(၇) ဦးသန်းထွန်း - အဖွဲ့ဝင်
(၈) ဦးစိုးမြင့် - အဖွဲ့ဝင်
(၉) ဦးလှဖေ - အဖွဲ့ဝင်
(၁၀) ဦးလွန်းတင် - အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ဦးညွန့်ဝေ - အဖွဲ့ဝင်
(၁၂) ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း - အဖွဲ့ဝင်
(၁၃) ဦးအုန်းကြိုင် - အဖွဲ့ဝင်
(၁၄) ဦးဝင်းမြင့် - အဖွဲ့ဝင်
(၁၅) ဦးထွန်းထွန်းဟိန် - အဖွဲ့ဝင်
(၁၆) ဒေါက်တာဝင်းနိုင် - အဖွဲ့ဝင်
(၁၇) ဦးဉာဏ်ဝင်း - အဖွဲ့ဝင်
(၁၈) ဦးဟံသာမြင့် - အဖွဲ့ဝင်
(၁၉) ဦးသိန်းညွန့် - အဖွဲ့ဝင်
(၂၀) ဒေါက်တာမေ၀င်းမြင့် - အဖွဲ့ဝင် တို့ဖြစ်သည်။
သောကြာ, 05 သြဂုတ် 2011
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/05/2011 1 အကြံပြုခြင်း
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ နှစ်ပတ်လည်နှင့် တကျော့ပြန်
ထက်အောင်ကျော် | သောကြာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၅ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၅ နာရီ ၅၀ မိနစ်
ရှေ့တပတ် (ဝ၈၊ ဝ၈၊ ၁၁) ဆိုရင် ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီး ၂၃-နှစ် ပြည့်ပါတော့မယ် အဲဒီ အရေးတော်ပုံ အတွင်း ပါဝင်ခဲ့သူတွေ အခုဘယ်ရောက်နေလဲ။ ဘာတွေ ဆက်လုပ်နေသလဲ။
အဲဒီကာလက စတင်ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး တိုက်ပွဲဟာ အခု ၂၃နှစ် ကြာပြီးတဲ့အခါမှာ ဘယ်လောက်အထိ ခရီးရောက် နေပြီလဲ။ နောက်ထပ်ဘယ်လောက် ထပ်ကြာဦးမလဲ။ ဒါဟာ နှစ်ပတ်လည်နေ့ရောက်တိုင်း လူအတော်များများက မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ မေးခွန်းထုတ်သူ ဦးရေဘက်မှာ ပိုများများလာနေပြီး ကိုယ်တိုင် အဖြေရှာသူ ဦးရေဘက်မှာ ပိုနည်းနည်းလာနေတာကို ကျနော်သတိထားမိပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့သူတွေအနေနဲ့ မေးဖို့တာဝန်ရှိသလို။ ဖြေဖို့လဲ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးမှာ ပါဝင်ခဲ့သူတွေထဲက ကိုမင်းကိုနိုင်အပါဝင် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေဟာ အခုချိန်ထိ အကျဉ်းထောင်တွေအတွင်းရှိ နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ABSDF ကျောင်းသား အမှတ်တရ (ဓါတ်ပုံ မဇ္ဈိမ)
အဖမ်းမခံရဘဲ ကျန်နေသူတွေကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ လက်တွဲပြီး
ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ တချို့ကတော့ နိုင်ငံရေး ပါတီထောင်ပြီး လွှတ်တော်နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းသစ်နဲ့ စခန်းသွားဖို့ ပြင်နေပါတယ်။
တချို့ကတော့ Low profile နဲ့နေပြီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွါးရေး လုပ်သူလုပ်။ NGO တွေမှာ လုပ်သူလုပ်။ ရွာပြန်ပြီး ခြံစိုက်သူစိုက်နဲ့ ရတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ပြီး နိုင်ငံရေး အခွင့်အလမ်းသစ်တခု ပေါ်လာမယ့်အချိန်ကို စောင့်ကြည့်
နေကြပါတယ်။ ဒါကရန်ကုန်နဲ့ ပြည်တွင်းက အခြေအနေပါ။
ကျနော် အဓိကတင်ပြလိုတာကတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့၊ ပါဝင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ နယ်စပ်နဲ့ ပြည်ပအခြေနေပါ။
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံအပြီး စက်တင်ဘာ ၁၈-မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် နယ်စပ်ဒေသဆီ ထွက်လာခဲ့တဲ့ ထောင်၊သောင်းချီရှိတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ အခု ဘယ် ရောက်ကုန်ပြီလဲ။ ဘာတွေ ဆက်လုပ်နေကြသလဲဆိုတဲ့ အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
နယ်စပ်ရောက် ကျောင်းသားတွေ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ABSDF ခေါ် ကျောင်းသား တပ်မတော်ဟာ အခုချိန်ထိ နယ်စပ်တကျောမှာ လှုပ်ရှားနေဆဲဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ရဲ့အင်အား ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်ကျော်က တတိယ နိုင်ငံတွေ
ဆီ ရောက်ကုန်ကြပါပြီ။ အဲဒီလူတွေဟာ နေ့စဉ် စားဝတ်နေရေးကိစ္စတွေနဲ့ လုံးပန်းနေရတဲ့အတွက် တောထဲက သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်ပြီး သိပ်မကူနိုင်တဲ့အပြင် သူတို့ရောက်နေတဲ့ တိုင်းပြည်မှာလည်း လက်တွေ့ကျတဲ့နိုင်ငံရေး သိပ်မလုပ်နိုင်တော့။
ဒါပေမဲ့ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့ အမျှ မေးခွန်း ထုတ်သူ ဦးရေဘက်မှာ ပိုများများလာနေပြီး ကိုယ်တိုင် အဖြေရှာသူ ဦးရေဘက်မှာ ပိုနည်း နည်းလာနေတာကို ကျနော် သတိထားမိပါတယ်
ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားလုပ်။ နိုင်ငံရေး
ကြေငြာချက်တွေထုတ်။ နယ်စပ်က ရဲဘော်တွေ အတွက် အလှူငွေ စုပို့ရုံထက်ပိုပြီး နေပြည်တော်က အရပ်ဝတ် စစ်အစိုးရကို လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားအောင် သိပ်လုပ်နိုင်ဖွယ် မမြင်။ ဒါက နှစ်စဉ် မြင်နေကျအခြေနေပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာတော့ အခြေနေက အရင်နှစ်တွေထက် နည်းနည်းပိုပြီး ထူးခြားမှုရှိနေတယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အငြင်းပွါးဖွယ် ရွေးကောက်ပွဲ နေ့စကစပြီး လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေ နယ်စပ်နဲ့မြို့ပြဒေသ တချို့မှာ ပြန်လည်ဖြစ်ပွါးနေပါတယ်။ ဒါဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃ နှစ် ကျနော်တို့ တောစခိုစဉ်ကနဲ့ ပြန်တူလာတဲ့ တခုတည်းသော အခြေနေဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်ဆိုက်မှုအဖြစ်ကတော့ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲ အလွန်လောက်ကစပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ အာရပ်ကမ္ဘာမှာ လူထုအုံကြွမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွါးနေပြီး လစ်ဗျားနိုင်ငံမှာဆိုရင် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အမြင့်ဆုံး အခြေအနေအထိ ရောက်နေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ABSDF နဲ့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအပေါ် စွန့်ခွာသွားသူတွေ။ လက်နက်ကိုင် လှုပ်ရှားနေလို့ အလှူငွေ ဖြတ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်တွေ။ အကြမ်းမဖက် အနုနည်းသက်သက် လုပ်မှရမယ် ဆိုတဲ့လူတွေ။ နောက်တခါ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကို ကွဲကွဲပြားပြား မခွဲခြားတတ်သူတွေ သူတို့ရဲ့မူဝါတွေကို ပြန်လည် သုံးသပ်ရမယ့် အချိန်ဖြစ်နေပြီလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
ထိုင်း၊ မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်နေစဉ် တိုက်ဆိုင်စွာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ နောက်ထပ် လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲတခုကတော့ တရုတ်၊ မြန်မာနယ်စပ်က ကချင်ဒေသမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၉ ဩဂုတ်လက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိုးကန့်ဒေသ တိုက်ပွဲနဲ့ မတူဘဲ ရေရှည်စစ် ပွဲတခု ဖြစ်လာနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံက ဦးစီးဆောက်လုပ်နေတဲ့ ရေကာတာ စီမံကိန်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာရဲ့
ဝေဖန်မှုတွေ တိုးလာနေပြီး ဒီစစ်ပွဲတွေကို အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပြီး ဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့ အမေရိကန် အပါဝင် နိုင်ငံတကာ ဘက်က တောင်းဆိုသံတွေ ထွက်လာနေပါတယ်။
၁၉၉၄ မှာ စစ်အစိုးရနဲ့ တရားဝင်အပစ်ခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်၊ချုပ်ခဲ့တဲ့ ကေအိုင်အို ဘက်ကတော့ (ကေအိုင်အို ဟာတခုတည်းသော စာချုပ်ချုပ်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ကျန် ၁၆-ဖွဲ့က နှုတ်ကတိနဲ့ အပစ်ရပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်) အပစ်ရပ်မယ်ဆိုရင် တရုတ်ဖြစ်ဖြစ် အာဆီယံဖြစ်ဖြစ် ကြားနိုင်ငံတခုခုက သက်သေအဖြစ် ပါဝင်ပေးဖို့
တောင်းဆိုနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သက်သေမရှိဘူးဆိုရင် အင်အားများသူက အချိန်မရွေး ကတိဖျက်နိုင်တာကြောင့်လို့ ကေအိုင်အိုဘက်က ထောက်ပြနေပါတယ်။
ကချင်တောင်တန်း ဒေသမှာ အပစ်ရပ်ရေး ဆွေးနွေးနေစဉ်မှာပဲ ရှမ်းပြည် အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ သေနတ်သံတွေ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါကတော့ ၁၉၉၂ ဝန်းကျင်က စစ်အစိုးရနဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်ခဲ့တဲ့ ရှမ်းပြည် တပ်မတော်အတွင်း တချို့က နယ်ခြားစောင့်တပ်ကို လက်ခံပေမယ့် တချို့က လက်မခံရာကနေ လက်မခံတဲ့အဖွဲ့နဲ့ အစိုးရတပ်တွေကြား ထိပ်တိုက်တွေ့လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတိုက်ပွဲတွေရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် မြောက်ပိုင်းနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲအတွင်း ထိုင်းနယ်စပ် အခြေစိုက် ဗိုလ်မှူးကြီး ရွက်စစ်ရဲ့ တောင်ပိုင်းတပ်တွေပါ ပါလာတဲ့ အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ တိုက်ပွဲဟာ စစ်မျက်နှာ ပိုကျယ်လာနေတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေနေမှာ ရှေ့က ကျနော်တင်ပြခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့သော ၂၃ နှစ်က နယ်စပ်ဆီ တောခိုပြီး လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲနဲ့ စစ်အစိုးရကို ဖြုတ်ချမယ်ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားတွေ အခုဘာလုပ်နေသလဲ။ ဗိုလ်မှူးနှုတ်ခမ်းမွေး (DKBA) တို့အဖွဲ့နဲ့
အတူ လက်တွဲ တိုက်ပွဲဝင်နေတာ အတော် အောင်မြင်နေပြီလို့ တတိယနိုင်ငံ ရောက်ပြီးမှ ပြန်လည် တောခိုလာသူ
ကျောင်းသား တပ်မတော် စစ်ဦးစီး အရာရှိတဦးက ကျနော့်ကို ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အငြင်းပွါးဖွယ် ရွေးကောက်ပွဲ နေ့စကစပြီး လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲတွေ နယ်စပ်နဲ့ မြို့ပြ
ဒေသတချို့မှာ ပြန်လည် ဖြစ်ပွါးနေပါတယ်။ ဒါဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃ နှစ် ကျနော်တို့ တောစခို စဉ်ကနဲ့ ပြန်တူလာတဲ့ တခုတည်းသော အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်
အခုချိန်မှာတော့ ကေအန်ယူ တပ်တွေပါ သူတို့နဲ့ အတူ ပူးတွဲပါဝင်လာပြီး သောင်ရင်းမြစ်နဲ့ သံလွင်မြစ်တလျှောက်က စခန်း အတော်များများကို ပြန်လည် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ သူက ဆိုပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးနှုတ်ခမ်းမွေး ကိုယ်တိုင်ကလဲ
ကျောင်းသားတပ်တွေ သူတို့နဲ့ လာပေါင်းတဲ့အပေါ် အထူးအားရ ကျေနပ်ပြီး ဒါဟာ တပ်ပေါင်းစုနဲ့ အောင်ပွဲခံဖို့ ပထမအဆင့် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဆက်စပ်ရေး။ မီဒီယာတွေ သံတမန်တွေနဲ့ ဆက်စပ်ရေးမှာ ABSDF က သူတို့အတွက် အများကြီး ကူညီပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဗိုလ်မှူးနှုတ်ခမ်းမွေးက ကျနော့်ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ကေအိုင်အိုနဲ့ ရှမ်းတပ်တွေဆီကိုကော ABSDF က သွားရောက် မပူးပေါင်းဘူးလား။ နယ်စပ်ဒေသရှိ ABSDF ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို ကျနော် တီးခေါက်ကြည့်တော့ KIO က သူတို့ကို ကမ်းလှမ်းထားပြီး ပူးပေါင်း တိုက်ပွဲဝင်ရေးအတွက် ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့တခု လိုင်ဇာဒေသဆီ သွားပြီး ဆွေးနွေးနေတာ အတော် ခရီးရောက်နေပြီလို့ အမည်မဖေါ်လိုတဲ့ ABSDF ခေါင်းဆောင်တဦးက ပြောပါတယ်။
တကယ်တော့ ABSDF ဟာ အရင်က ကေအိုင်အို အပါဝင် တခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့ အတူ လက်တွဲ တိုက်ပွဲဝင်နေပေမယ့် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန် နှစ်တွေအတွင်း အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်တဲ့အခါမှာတော့
ကျောင်းသားတွေကို ငြိမ်းနယ်မှာ လက်ခံ မထားရဘူးဆိုပြီး စစ်အစိုးရက ဖိအားပေးတဲ့အတွက် ၁၉၉၆ နှစ်လယ်
လောက်မှာ ကေအိုင်အိုနယ်ကနေ ကျောင်းသားတွေ ထွက်ခွာလာခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုချိန်မှာတော့ အပစ်ခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်တွေ ပျက်ပြယ်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောင်းသား
တွေကို တိုင်းရင်းသား တပ်တွေကိုယ်တိုင်က ဖိတ်ခေါ်လာတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ ဖိတ်ခေါ်မှုမျိုးကို မွန်ပြည်သစ်နဲ့ ရှမ်းပြည် တပ်မတော်တွေဆီကနေ မကြားရသေးပေမယ့် မကြာခင် ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့
၁၉၉ဝ ပြည့်လွန် နှစ်တွေအတွင်း အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်ခဲ့တဲ့ ငြိမ်းအဖွဲ့တွေဟာ တဘက်မှာ စစ်အစိုးရနဲ့ ဒီလို အဆင်မပြေမှုတွေ ရှိလာနေပေမယ့် တခြား တဘက်မှာလည်း မြို့ပြ တည်ဆောက်ရေး။ မြို့ပြ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေကို ကောင်းကောင်း လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၉ မှာ ပထမဆုံး အပစ်ရပ်ခဲ့တဲ့ ဝ' ဒေသမှာဆိုရင် မြို့နယ်ပေါင်း ရှစ်ခုနဲ့ တကယ့်ကို မြို့ပြနိုင်ငံတခုလို ဖြစ်နေ
ခဲ့ပါပြီ။ အလားတူ ဦးစိုင်းလင်းရဲ့ မိုင်းလားဒေသနဲ့ အခုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ ကေအိုင်အိုရဲ့ လိုင်ဇာ-ဒေသတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း သူပုန်တွေမှာ မြို့ပြတည်ဆောက်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည် နေပြည်တော်က စစ်အစိုးရထက် ပိုအားသာနေတယ် ဆိုတာကို သိသာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ သူတို့ဒေသကို စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှုအောက် သွတ်သွင်းမယ့် ၂ဝ၁ဝ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက် ရွေးကောက်ပွဲ
ကိုလဲ သူပုန်ဟောင်းတွေက သူတို့နယ်မြေမှာ ကျင်းပခွင့် မပေးခဲ့ပါဘူး။
တကယ်လို့ အခုဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ၊ နယ်ခြားစောင့် တပ်ပြဿနာတွေ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ပြဿနာတွေကို အချိန်မီ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ဆွေးနွေး အဖြေမရှာနိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ခုနက ထောက်ပြခဲ့တဲ့ သူပုန်တွေရဲ့ မြို့ပြနိုင်ငံသစ်
တွေ အပြင် နေပြည်တော်နဲ့ တခြားဒေသက မြို့ပြနိုင်ငံတွေပါ ပျက်စီးလာနိုင်တဲ့ အခြေနေမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် အမြန်ဆုံး ဆွေးနွေး အဖြေရှာဖို့ နိုင်ငံတကာက တောင်းဆိုနေပါတယ်။
ဒီတောတွင်းမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလဲ အစိုးရဝန်ကြီး တဦးဖြစ်သူ ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့လ အတွင်းကပဲ ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြန်စလာတာတွေ့ရပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ ပြေလည်စေရေးအတွက် သူတတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီပေးချင်တယ်လို့ ကြေငြာချက် တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်တခါ ရွေးကောက်ပွဲဝင် တိုင်းရင်းသားပါတီ ၅ ခုကလည်း အလားတူ ကြေငြာချက်မျိုး ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒါမေပဲ့ အခုချိန်ထိတော့ ကြေငြာချက်တွေ စာရွက်စာတမ်းတွေ အဆင့်မှာပဲ ရှိနေသေးပြီး တိုက်ပွဲတွေကို တားဆီး ရပ်တန့်အောင် တကယ်ဝင်လုပ်နိုင်တဲ့သူ မတွေ့ရသေးပါဘူး။
နောက်တခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကကော အရင်စစ်အစိုးရ လက်ထက် ကထက် ပိုပြီးထူးလာပါ့မလား ဆိုတာကိုလဲ အကဲခတ်တွေက သံသယ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ၂၃ နှစ်ကြာ ကျနော်တို့ရဲ့ တော်လှန်ရေးအခြေနေကို ဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင် အခြေနေဟာ ရှေ့ကို မတိုးနိုင်
တဲ့ အပြင် နောက်ပြန်ဆုတ်နေတဲ့သဘော။ ငြိမ်းချမ်းရေး ပျက်ပြီး စေ့စပ် ဆွေးနွေးရေးသမားတွေ ဖမ်းဆီးခံရ။
သေနတ်သံတွေ ပြန်ကြားလာနေတဲ့သဘော ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းဝိုင်းက အမြန်ဆုံး ကြားဝင် ဖြန်ဖြေပေးဖို့ လိုနေပါတယ်။
၁၉၈၉ မှာ ပထမဆုံး အပစ်ရပ်ခဲ့တဲ့ ဝ' ဒေသမှာ ဆိုရင်
မြို့နယ်ပေါင်း ရှစ်ခုနဲ့ တကယ့်ကို မြို့ပြ နိုင်ငံ တခုလို
ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ အလားတူ ဦးစိုင်းလင်းရဲ့မိုင်းလား
ဒေသနဲ့အခုတိုက်ပွဲ တွေဖြစ်နေတဲ့ ကေအိုင်အိုရဲ့
လိုင်ဇာ-ဒေသ တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း သူပုန်တွေမှာ မြို့ပြ တည်ဆောက်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည် နေပြည်တော်က စစ်အစိုးရထက် ပိုအားသာနေတယ် ဆိုတာကို သိသာနိုင်ပါတယ်
တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်အပါဝင် နိုင်ငံတကာဘက်ကနေ အချိန်မီကြားဝင် ဖြန်ဖြေပေးဖို့ အချိန် နောက်ကျသွားမယ် ဆိုရင်တော့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ အခြေနေဟာ ၁၉၈၈၊ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကာလ အခြေနေကို ပြန်ရောက် သွားဖို့ သေချာသလောက်ရှိနေပါတယ်။
ဒီလိုအခြေနေမျိုးမှာ အာရပ်ကမ္ဘာမှာ လူထုအုံကြွမှုတွေ အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ် နေပါတယ်။ လစ်ဗျားနိုင်ငံမှာဆိုရင် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးက အမြင့်ဆုံး အခြေအနေ ရောက်နေပြီး မြို့တော် ထရီပိုလီ ကိုတောင် သူပုန်တွေက မနက်ဖြန် သဘက်ခါမှာ သိမ်းဖို့
ဒီဖြစ်စဉ်တွေအပေါ် ကျောင်းသားတွေက အားကျနေပြီး ဒီကယက်တွေ မြန်မာနိုင်ငံဆီကိုပါ ပျံ့နှံ့လာမယ်လို့ သူတို့က
မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ဒီမျှော်လင့်ချက်ကို ပေးခဲ့သူတွေထဲမှာ အမေရိကန် လွတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင် ပါဝင်နေတဲ့အတွက် မဖြစ်နိုင်တာကို ကျောင်းသားတွေက မျှော်လင့်နေတယ်လို့တော့ ပြောဖို့ ခက်ပါတယ်။
တကယ်ကတော့ သူတို့ရဲ့မျော်လင့်ချက်ဟာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတင် မကပါဘူး။ လစ်ဗျားကို နေတိုးအဖွဲ့က ဗုံးကြဲပြီး သူပုန်တွေက တနိုင်ငံလုံးကို တဖြည်းဖြည်းချင်း သိမ်းပိုက်နေတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကိုလဲ သူပုန်တွေက အားကျနေတာ
သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်အားကျမှုတွေဟာ လက်တွေ့နဲ့ ဘယ်လောက် နီးစပ်သလဲ။ စိတ်ကူးယဉ် သက်သက်များ ဖြစ်နေ
လေ မလား။ ဒါဟာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းဝိုင်းရဲ့ ရပ်တည်ချက်နဲ့ ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ။ နယ်စပ်က လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် မူတည်နေပါတယ်။
လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေ၊ နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေကို တွေဆုံ ဆွေးနွေးပြီး အဖြေရှာနိုင်အောင် ကုလသမဂ္ဂနဲ့
နိုင်ငံတကာ အသိုင်းဝိုင်းက အရပ်ဝတ် စစ်အစိုးရကို အသေချာ ဖိအားပေးနိုင်မလား။ ဒါမှမဟုတ် လစ်ဗျားပုံစံ စစ်ရေးအရ အရေးအရေးယူပြီး အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖြုတ်ချရေးကို ဆောင်ရွက်မလား။ ဒီနှစ်ခုထဲက တခုခုကို
ရွေးချယ်ပြီး အချိန်ဇယားအတိအကျနဲ့ စတင်အကောင်ထည် ဖေါ်ဖို့ အရေးပေါ် လိုနေပါတယ်။
ဒီ ၂ ခု လုံးကို လျစ်လျူရှုပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃ နှစ်ကလိုပဲ သောင်မတင် ရေမကျ ဇာတ်မျှော ဆက်လုပ်ထားမယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေနေဟာ မထူးဇာတ်ခင်းပြီး လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲနဲ့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး ဘက်ဆီ ပြန်လည် ဦးလှည့်သွားဖို့ အခြေနေ အရပ်ရပ်က တွန်းပို့နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
၀ါးရင့်ကို ၀ါးနုပတ်တာလား ဦးဇေကမ္ဘာ
လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းစဉ်မှစ၍ ယနေ့ တိုင် (၁၀၅)နှစ်သက်တမ်းရှိခဲ့ပြီဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယုဝ
အသင်း ( YMBA ) ဥက္ကဌဦးတင်ဝင်းကို သာသနနုဂ္ဂဟအသင်းဗဟို၌ ဒုတိယဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်
သာသနနုဂ္ဂဟအသင်းဥက္ကဌ ဒေါက်တာခင်ရွှေ၏ ကမ်းလှမ်းအဆိုပြုချက်ကို YMBA မှ လက်မခံခဲ့ကြောင်းသိရ
အဆိုပါတွေ့ ဆုံပွဲတွင် သာသနနုဂ္ဂဟအသင်းဗဟိုဥက္ကဌ ဒေါက်တာခင်ရွှေက “ YMBA အသင်း၏ ရည်ရွယ်
ချက်များ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ သာသနနုဂ္ဂအသင်းနှင့်တူနေကြောင်း၊ YMBA အသင်းဥက္ကဌကြီး၏
လုပ်ဆောင်ချက်များကို အားရကြောင်း၊ YMBA အသင်းဥက္ကဌကြီးကို သာသနနုဂ္ဂဟအသင်း၌ ဗဟို ဒုတိယ
ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် propose လုပ်ပါကြောင်း၊ ဆန္ဒပြုပါကြောင်း၊ ၄င်းအပြင် YMBA မှလည်း
ဗဟို၊ တိုင်း၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်အဆင့်ဆင့်၌ ပါဝင်စေလိုကြောင်း၊ YMBA မှ လိုအပ်သောငွေကြေးကို ပံ့ပိုးပေးသွား
မှာဖြစ်ကြောင်း YMBA မှ ပြုလုပ်သောအကြောင်းကို စီမံချက်တင်ပြပေးပါရန်နှင့် YMBA အသင်းအနေဖြင့်
သာသနနုဂ္ဂဟအသင်းအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါကြောင်း ” စသည်ဖြင့် ကမ်းလှမ်းဆွေးနွေး
( The HOT NEWS ဂျာနယ်၊ Vol. 1, No. 51 “YMBA အသင်းဥက္ကဌ သာသနနုဂ္ဂဟအသင်း ဗဟိုဒုဥက္ကဌနေရာ
လက်မခံခဲ့” မှ တည်းဖြတ်ထုတ်နုတ်ဖော်ပြပါသည်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေပြည်တော် ဖိတ်ရေး လက်တွေ့ကမ်းလှမ်းမှု မရှိသေး
ရန်ပိုင် Friday, 05 August 2011 17:01
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး ဆွေးနွေးပွဲသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဖိတ်ကြားမည်ဟု ပြောဆိုသော်လည်း လက်တွေ့ကမ်းလှမ်းမှု မရှိသေး၍ သံသယဖြစ်မိကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) က ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်သည်။
နေပြည်တော်၌ ယခုလအလယ်၌ အစိုးရကပြုလုပ်မည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး ဆွေးနွေးပွဲသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား NLD ပါတီ ခေါင်းဆောင်တဦးအနေဖြင့် ဖိတ်ကြားခြင်းမဟုတ်ဘဲ တသီးပုဂ္ဂလအနေဖြင့် ဖိတ်ကြားမည်ဟု ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း ဧရာဝတီအပါအ၀င် ပြည်ပမီဒီယာတချို့ကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ နိုင်ငံရေးအကြံပေး ဒေါက်တာ နေဇင်လတ်က ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
NLD ပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက “ဖိတ်စာလည်းမရဘူး၊ အဆက်အသွယ်လည်း မရှိဘူး၊ မှားပြောတယ်လို့ ထင်တယ်” ဟု ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဒေါက်တာ နေဇင်လတ်က မီဒီယာများတွင် ပြောဆိုခြင်းသည် ၎င်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထင်မြင်ချက်ဖြစ်ပြီး အစိုးရ၏ အာဘော်ဟု မထင်ကြောင်း၊ ဖိတ်ကြားခံရမည်ဟုလည်း မျှော်လင့်ချက် မထားကြောင်း ဆက်ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် လအတွင်းကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနနှင့် လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန နှစ်ဌာန ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့ အစိုးရ ဧည့်ဂေဟာတွင် တွေဆုံဆွေးနွေးပြီး ပူးတွဲကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထိုတွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်း သမ္မတ နိုင်ငံရေး အကြံပေး ဒေါက်တာနေဇင်လတ်၏ ယခုကဲ့သို့ ပြောဆိုမှု ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ နေဇင်လတ်ကမူ “ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အားလုံး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန် ဖိတ်မယ်။ ၀န်ကြီးဌာနက အကြောင်းကြားလိမ့်မယ်။ ဒါ အလားအလာကောင်းတွေပဲ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
NLD ပါတီ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည့် ဦးဝင်းတင်က “ဖိတ်စာတွေ ဘာတွေနဲ့ တရားဝင်ပြောရမယ်၊ အခုပြောတာက မီဒီယာကဆိုတော့ တရားဝင်ပြောတာ မဟုတ်ဘူးလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ယခု ပြောဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ပါတီဝင်များ အကြားတွင်လည်း ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်း မရှိကြောင်း၊ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာမည်ဟုလည်း မထင်ကြောင်း ဦးဝင်းတင်က ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ထိုဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး ဆွေးနွေးပွဲများသည် အစိုးရသစ်လက်ထက် ပြီးခဲ့သည့် မေလအတွင်းကမှ စတင်ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင် ကြီးမှူးကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီ Friday, 05 August 2011 17:37 အင်တာဗျူး
စက်ာပူရောက် မြန်မာတပြည်လုံး G.T.I ကျောင်းဆင်းများ ...
ချီလီတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင် ...
ဆင်း​ရဲမွဲ​တေမှု ​လျှော့​ချ​ရေး​ လက်​တွေ့​ ပြဿနာမျာ...
စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးငယ် ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေပြည်တော် ဖိတ်ရေး လက်တွေ့ကမ...